Ihe omuma ihe omuma uzo esi eme nke oma na SEO
Ka ị na-agụ nke a, nyocha ọchụchọ njikarịcha (SEO) na-agbanwe. Ọ naghị egbochi onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ gaghị 'akwa' maka ngwụsị izu ma ọ gaghịkwa eme nke a na ezumike na-abịa - hosting gratis peru. Dịka ị maara, ihe mgbaru ọsọ nke nyocha ahụ bụ itinye ebe nrụọrụ weebụ kachasị mkpa na nke na-enye nkọwa na ibe mbụ nke ajụjụ ọchụchọ. Ryan Johnson, ọkachamara ọkachamara , na-akọwa na engines na-achọ algorithms nke na-agbanwe mgbe nile iji nweta nke a. Dị ka nke a, ị kwesịrị ịdị njikere ịmalite ịmụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị ka ị ghara ịhapụ.
Adalara na laurels gị
Ya mere, ị na-amụmụ ọnụ ọchị n'ihi na ịnweghị otu, abụọ maọbụ atọ ma ise ntanetịime nrụọrụ weebụ maka mkparịta ụka kacha asọmpi na nchịkọta ha? Ekele, ekele maka ihe ị rụpụtara. Nke a abụghị obere ihe. Kedu ihe onye nwe saịtị ga-eme ka ọ nọgide na-arụ ọrụ ọma a? Cheta na ihe niile ọ na-ewe bụ nwelite algorithm na ihe niile gbanwere. Ebe nrụọrụ weebụ gị ọ ga-egosi ihe ga-eme n'ọdịnihu Ị ga-adị njikere ịtụle aro ndị na-esonụ ka ị nọrọ n'elu egwuregwu gị?
Ihe bụ, ọ bụrụ na ịjụghị ajụjụ ndị kwesịrị ekwesị mgbe ahụ ị gaghị aga n'ihu egwuregwu a ruo ogologo oge. Ogologo oge gara aga bụ mgbe SEO bụ ndepụta nchịkọta. Taa, a na-atụle ndepụta mpaghara, mgbasa ozi mmadụ, vidiyo na ntinye ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọ dị mma ịjụ ajụjụ dịka akọwara n'elu, anaghị akpachara anya maka ụdị ozi ọ bụla enyere gị. N'ezie, ị ga-ekewapụ igbogbo ọka si ọka. O doro anya na ị ga-anwale ihe. Nyochaa nkwenye niile. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ, nke ahụ bụ ezigbo ahụmịhe.
Ghọta na aro ọhụrụ
Onye ọ bụla ọkachamara SEO nwere usoro ndị ọ na-eji eme ihe na weebụsaịtị ha. Cheedị n'echiche, ọ bụrụ na ị bụ onye nwe SEO, ị ga-atụle ihe ọ bụla a gwara gị? Ya mere, dịrị njikere ige ntị na aro na echiche sitere n'aka ndị gbara gị gburugburu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iche n'èzí igbe ahụ tụkwasịrị m obi, ị gaghị aga ebe dị anya.
Google, Bing, Yahoo na ngwa engines ndị ọzọ na-abịa na algọridim dị mgbagwoju anya iji hụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nke kacha mma na-eme ka ebipụ ya. Ka ihe na-emeghe, ụfọdụ usoro SEO nwere ike ịbịaru. Ị na-echeta ụbọchị ndị ahụ mgbe otu ga-adaba ọdịnaya nke ọdịnaya ha na ebe nrụọrụ weebụ? Ya mere, jụọ ajụjụ ndị siri ike, nwalee echiche, bụrụ ndị nwere uche, ị ga-ahụkwa otú ihe si agbanyụ.